Xil ka qaadista Trump: Maxaa ku dhaca marka madaxweyneyaasha laga gudbiyo xil ka qaadista? | Gaaroodi News
Xil ka qaadista Trump: Maxaa ku dhaca marka madaxweyneyaasha laga gudbiyo xil ka qaadista?
January 14, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee labo jeer ay xil ka qaadis ka gudbiyaan Aqalka Wakiillada -wuxuuna ka mid yahay saddex madaxweyne oo hore xil ka qaadis looga gudbiyay.
Waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa wixii ku dhacay kuwii ka horreeyay.
Andrew Johnson wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee xil ka qaadis laga gudbiyo
Iyadoo uu socday dagaal sokeeye, Madaxweyne Andrew Johnson – oo Dimuqraaddiga ka tirsanaa – ayaa si joogto ah waxay Kongareeska oo uu maamulayay Jamhuuriga isugu dhici jireen sidii dib loogu dhisi lahaa Koofurta Mareykanka ee laga guuleystay.
“Jamhuuriyiinta xagjirka ahaa” ee xilligaas ayaa dabada ka riixayay sharci lagu ciqaabayo hoggaamiyeyaashii hore ee gobollada isbahaystay laguna dhowri lahaa xuquuqda addoomadii la xoreeyay. Johnson ayaa codkiisa qayaxan ee madaxtinnimada u adeegsaday inuu is hortaago dadaalkii Jamhuuriyiinta.
Bishii March, Kongareeska ayaa ansixiyay sharci meesha ka saaraya awoodda uu madaxweynuhu u leeyahay cayrinta xubnaha ka tirsan golihiisa wasiirrada iyadoo uusan anisixin Aqalka Sare. Johnson oo taas ka carooday ayaa shaqada ka tiray xubin wasiirrada ka tirsanaa isla markaana mucaarad ahaa, Edwin Stanton, iyadoo uu Konagreesku hakad ku jiray.
Stanton ayaa xil ka qaadistiisa kaga falceliyay inuu isku soo xiro xafiiskiisa isagoo diiday inuu ka baxo.
Xil ka qaadista Stanton ayaa waddo cusub furtay. Jamhuuriyiinta Aqalka ayaa degdeg u soo saaray 11 qodob oo xil ka qaadis ah.
Kaddib markii cod loo qaaday qodobbadaas waxaa loo gudbiyay Senate-ka, halkaas oo xilka looga qaaday.
Sida laga soo xigtay dadka qaar, Johnson ayaa aad uga gubtay warka xil ka qaadistiisa, isagoo wacad ku maray inuu ka gilgilan doono soona celin doono sharaftiisa.
Balse taas uma socon.
Wuu sii watay intii uga harsaneyd muddo xileedkiisii madaxtinnimada, balse bilihiisii ugu dambeeyay wuxuu la daalaa dhacayay isla dhibaatooyinkii awoodda ee qalqalka geliyay muddo xileedkiisa kahor inta aan xil ka qaadista laga gudbin.
Sanadkii 1869, Dimuqraaddiyiinta ayaa lumiyay awooddii Aqalka Cad iyadoo uu kala wareegay musharraxii Jamhuuriga Janaraal Ulysses S Grant, oo oggolaaday inuu sii socdo qorshihii xisbigiisa ee dib u dhiska
Maxaa lagu xusuustaa?
In xil ka qaadis laga gudbiyay.
Iyo inuu sanadkii 1867 Alaska ku iibsaday lacag dhan $7.2m.
Johnson wuxuu sidoo kale ka mid ahaa madaxdii ugu saboolsaneyd. Weligiis iskuul ma uusan tegin.
Xil ka qaadistii uu qarka u saarmay Richard Nixon waxay ka dambeysay markii sanadkii 1972 loo dhacay xarumaha xisbiga Dimuqraaddiga ee dhismaha Watergate ee maagalada Washington DC.
Iyadoo baaritaanno la sameeyay ay caddeeyeen in lacag laga dhacay xarumahaas lagu bixiyay deeqihii ololihii dib u doorashada Nixon, fadeexaddii Watergate ayaa ka gudubtay dhacii loo geystay xarumaha xisbiga, iyadoo gashay saraakiil ka tirsanaa Aqalka Cad.
Muddo ku dhow labo sano, Nixon wuxuu isku dayayay inuu qariyo doorkii uu ku lahaa khiyaanadaas.
Dadaalka madaxweynihii Jamhuuriga ka tirsanaa ayaa miro dhali waayay. Bishii August 1974, iyadoo Guddiga Aqalka Caddaaladda ay dyaarinayaan qodobbada xil ka qaadista, Nixon waxaa lagu qasbay inuu soo bandhigo cod laga maqli karay madaxweynaha oo shaqaalihiisa ku amraya in CIA ay FBI u sheegaan inay joojiyaan baaritaanka ay ku hayaan dhacii Watergate.
Codkaas oo cajalad ku duubnaa ayaa soo afjaray wixii uu Nixon isku dayay inuu daaha saaro
27-KII July, Aqalka Guddiga Caddaaladda ayaa u codeeyay meel marinta saddex qodob oo xil ka qaadis ah – is hortaagidda caddaaladda, si xun u isticmaalidda awoodda iyo hoos u dhigidda Kongareeska – waxayna u direen Aqalka si si buuxda loogu codeeyo.
Balse, codka marna lama qaadin.
Taariikhdu markay ahayd 8-ddii August, 1974, Nixon ayaa is casilay. Wuxuu noqonayaa madaxweynihii keliya ee Mareykanka ee sidaas sameeya. Nixon oo macsalaameynaya shaqaalihiisa kaddib markii uu is casilay
“Weligey qof is dhiiba ma ahay,” ayuu ku yiri khudbaddiisii is casilaadda. “Inaan xafiiska ka tago ka hor inta aysan muddada ii dhammaan aad ayay ii dhibeysaa. Balse madaxweyne ahaan, waa inaan horumariyaa danta Mareykanka.”
Madaxweyne ku xigeenkii Gerald Ford ayaa lix toddobaad kaddib xilka loo dhaariyay, wuxuuna Nixon ka cafiyay dembi walba oo uu geystay intii uu xilka hayay.
Doorasho la qabtay wax ka yar labo sano kaddib, Ford waxaa xilka kala wareegay Jimmy Carter oo Dimuqraaddi ahaa.
Madaxweyne Clinton oo ejedinaya khudbad kaddib markii ay xil ka qaadis ku sameeyeen Aqalka Wakiillada
Sanado yar kaddib markii Madaxweyne Bill Clinton uu ku baaqay cafinta guul darrooyinkii Nixon, ninkan Dimuqraaddiga ka tirsanaa ayaa wajahayay xasarado siyaasadeed.
Sanad gudihiis markii uu xilka qabtay, Mr Clinton waxaa baaritaan ku sameeyay dacwad ooge gaar ah oo ka tirsanaa Waaxda Caddaaladda.
Baaritaankii ku lug lahaanshaha hanti guryo ah wuxuu sii ballaartay bishii January 1998 waxaana lagu soo daray xiriirkii jaceyl ee uu madaxweynuhu la lahaa gabar Aqalka Cad ka shaqeyn jirtay oo lagu magacaabo Monica Lewinskyq
Iyadoo ay qeyb ka ahayd dacwad kale oo madaxweynaha lagu soo oogay – oo ahayd tacaddi jinsi oo uu kula kacay Paula Jones – Mr Clinton waxaa wax laga weydiiyay xiriirkii uu la lahaa Ms Lewinsky. Dhaarin dhacday 17-kii January ayuu Mr Clinton ku beeniyay inuu gabadhaas xiriir la lahaa. Monica Lewinsky ayaa oggolaatay inay ka qeyb qaadato baaritaankii Bill Clinton
Maalmo kaddib, Mr Clinton ayaa sii laa jibbaaray dafiriddiisa.
“Waxaan idinka doonayaa inaad i dhegeysataan,” Madaxweyne Clinton ayaa sidaas ugu sheegay warbaahinta, shir jaraa’id oo uu Aqalka Cad ku qabtay. “Wax galmo ah lama sameyn haweeneydaas, Monica Lewinsky. Weligey marna cid been ugama sheegin, ma aha mar, ee weligey ma sameyn.”
Taariikhdu markii ay ahayd 9-kii September 1998, dacwad oogaha ayaa warbixin u gudbiyay Kongareeska. Dadweynaha ayaa sidoo kale arkay warbixintaas oo 445 bog ka koobneyd taas oo ay ku jirtay xigashada Ms Lewinsky, taas oo wada shaqeynteeda heshiis xasaanad lagu siinayo kula gashay guddigii madaxa bannaanaa.
Warbixinta waxaa sidoo kale ka mid ahaa 11 qodob oo suurto gal ah oo xilka looga qaadi karay. Bishii December 1998, Aqalka Wakiillada ayaa u codeeyay xil ka qaadista Mr Clinton iyadoo loo heysto labo dacwadood: dhaar been ah iyo inuu baal maray Kongareeska.
Bishii February, Mr Clinton waxaa xilka ka qaaday Aqalka Sare oo ay maamulayeen Jamhuuriga.
Sanad ay fadeexaddii Lewinsky-Clinton qabsatay dalka, madaxweynaha ayaa diiday baaqyadii isa soo tarayay ee ahaa inuu is casilo.
Waxay ahayd dhammaadkii January 1998, markii Mr Clinton uu helay codadkii ugu sarreeyay ee qiimeynta. Ra’yi ururin ay sameysay Gallup ayaa lagu ogaaday in 67% dadka Ameerikaanka ah ay ansixiyeen madaxweynaha.
Ugu dambeyntii, siyaasiyiinta keliya ee xilkooda ku weynayay marka ay xil ka qaadistu socoto waxay ahaayeen Jamhuuriyiinta.
Qorshihii Jamhuuriyiinta ee ahaa inay sii wadaan ka gun gaaridda fadeexaddaas ayaan miro dhal noqon: Dimuqraaddiyiinta ayaa guulo ka gaaray Aqalka iyo Senate-ka labadaba.
Mr Clinton ayaa talada ka degay January 2001 isagoo heysta ansixin 65% ah.
Balse xisbigiisa ayaa waxaa Aqalka Cad kaga guuleystay George W Bush oo Al Gore uga guuleystay dib u tirinta codadka oo lagu sameeyay Florida.
Waxay ku xiran tahay cidda aad weydiiso balse fadeexaddii Monica Lewinsky waa waxa ugu horreeya ee ay dad badan ku xusuustaan. Xil ka qaadistii laga gudbiyay ee ka dambeysay? aad looguma xusuusto.
Marka la eego codadkii sare ee uu ku helay qiimeynta waxaa la sheegay inaysan sumcaddiisa aad u dhaawicin sida labadii madaxweyne ee ka horreeyay